Somaliland: Waa Maxay Casriyeynta Taallada Taariikhda Qaranka? | Aftahan News
Somaliland: Waa Maxay Casriyeynta Taallada Taariikhda Qaranka?
Hargeysa(Aftahannews):- Agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile, oo ay weheliyaan Agaasimaha barnaamijka Shaqo qaran iyo Maayerka Hargeysa, ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey dhismaha taallo casri ah oo Astaamaha taariikhihii ugu waaweynaa ee ay Somaliland soo martay lagu xardho, oo laga dhisi doono duleedka madxafka qaranka ee uu dhismihiisu ka socdo badhtamaha caasimadda.
TAALLADA TAARIIKHDA QARANKA SOMALILAND HARGEISA 2020
Kulanka shaacinta dhismahan oo lagu soo bandhigay naqshaddda taalladaas iyo qaabka ay u ekaan doonto, ayuu agaasimaha madaxtooyadu ku faah-faahiyey ujeeddada laga leeyahay taalladan iyo waxyaabaha ay ka koobnaan doonto, waxana uu sheegay inay taalladu qayb ka tahay dhismaha madxafka weyn ee qaranka oo uu dhismihiisu socdo, kaas oo kamid ah midhaha siyaasadda madaxweynaha qaranka.
AGAASIMEYAASHA MADAXTOOYADA SHAQO QARAN IYO MAAYERKA HARGEYSA 2020